China Aspirator Averlast 20 စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ အချစ်ရယ်
AngelBiss ခရီးဆောင်စုတ်ယူနိုင်သောစက်ကိုအိမ်စောင့်ရှောက်မှုတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ စက်သည်အရွယ်သေးငယ်ပြီးအလွန်ပေါ့ပါးသည်။ ထိုအရာသည်ရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူစွာလည်ပတ်စေသည်။
ယနေ့ခေတ်တွင်လူများစွာသည် bronchitis ခံစားနေရပြီးသလိပ်ရန်ခက်ခဲသည်။ အထူးသဖြင့်အကြီးအကဲများအဘို့။ တစ်ခါတစ်ရံသူတို့သည်လည်ချောင်းတွင်သလိပ်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရသည်ဟုခံစားရပြီး၎င်းသည်ချောင်းဆိုးခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ အရမ်းအန္တရာယ်များလိမ့်မယ်
AngelBiss ခရီးဆောင်စုတ်ယူနိုင်သောစက်သည်ဤအရေးပေါ်အခြေအနေကိုလျှောက်ထားလိမ့်မည်။ သင်ပိုင်ဆိုင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဤခရီးဆောင်စုတ်ယူစက်သည်သင့်အားအခြေအနေကိုကိုင်တွယ်ရန်အမြန်ဆုံးနှင့်လုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းလမ်းကိုပေးလိမ့်မည်။
AngelBiss အိတ်ဆောင်စုတ်ယူနိုင်သောစက်သည် 18L နှင့် 25L လေတို့စီးဆင်းသည်။
ထို့ကြောင့်ဆရာ ၀ န်၏ညွှန်ကြားချက်အရသင့်အထူးတောင်းခံမှုအတွက်သင့်တော်သောရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ပါ။
၁.၀၈ Mpa အထိစွမ်းအားမြင့်စုတ်ယူခြင်း
၃။ တိုက်ရိုက် Plug-in ပုလင်းစနစ်
4. 1400 ml စွမ်းရည်စုတ်ယူခြင်းပုလင်း
၅။ တီထွင်ဆန်းသစ်သော filter နည်းပညာသည် micro သက်ရှိများမ ၀ င်ရောက်နိုင်အောင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ၆. စက်ထဲသို့လျှို့ဝှက်ခြင်း
၇။ စုတ်ယူခြင်းပိုက်တစ်ခုအတွက်ဝင်ပေါက်တစ်ခုသာလေ ၀ င်လေထွက်ပေါက်နှင့်အထွက်ကိုလှည့်စားခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ
20L & 25L Air Flow Options
ANGELBISS သည်ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သော 25L စုပ်ယူစက်ကိုလည်းရွေးချယ်ပေးသည်
1. အားပြန်သွင်းနိုင် DC12V
၂။ မိနစ် ၉၀ အတွင်းလျင်မြန်စွာအားသွင်းပါ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ပြေးနိုင်အောင် ၁၈၀ မိနစ် (၃ နာရီ)
3. Superior Lithium ဘက်ထရီများ
၂၅ လီ / မိနစ်
၂၀L / မိနစ်
ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း Run ကို
စဉ်ဆက်မပြတ် Run ပါ
လေဟာနယ် gauge Range
(0psi ～၁၄ psi)
စုတ်ယူခြင်း Hose ဟန် Groove
Hang Tip ကိုတပ်ဆင်ထားသည်
ပထမ ဦး ဆုံးအဆင့်ကိုရပ်တန့်လျှံ
AC အ 220 ~ 240V Input, DC က 12V Output
1 အစုံ, DC က 12V
၁ နာရီ ၁.၅ နာရီပြည့်
လူနာတင်ကားကား Adapter ကို
DC က 12V
မိနစ် ၃၀ တိုင်း
1.0 A -φ5× 20mm
၁.၀ က -φ5×၂၀ မီလီမီတာ
၅.၀ က -φ5×၂၀ မီလီမီတာ
2 ယူနစ်များအတွက် 415x360x300mm
2 ယူနစ်များအတွက် 415x360x300 မီလီမီတာ
၄၁ ℉မှ ၁၀၄ ℉ (၅ ℃မှ ၄၀ ℃)
RH မှ 10% မှ 90%
-4 ℉ to 131 ℉ (-20 55 မှ 55 ℃)
RH မှ 10 မှ 95%
အိတ်ဆောင် AngelBiss ခရီးဆောင်စက်၊ အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်း၏စက်သဘောတရားကိုဂျာမနီမှတင်သွင်းသည်။ လူ့အမြင်အာရုံဒီဇိုင်းမှအသစ်ဖွဲ့စည်းပုံအပြင်အဆင်နှင့်လွယ်ကူစွာသွားနိုင်သောသယ်ဆောင်နိုင်သောစုတ်ယူစက်၏ပုံသဏ္wholeာန်သည်စတိုင်ကျ။ ရိုးရှင်းပါသည်။
AngelBiss ခရီးဆောင်စုတ်ယူနိုင်သောစက်သည်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဖြင့်လည်ပတ်သည်။ ထူးခြားသောကောင်းကျိုးများနှင့်အတူဆူညံသံနည်းခြင်း၊ ဆီမပါခြင်း၊ အရွယ်အစားအလွန်ပေါ့ပါးခြင်း၊ စက်ပစ္စည်းကိုယ်ထည်ပစ္စည်းသည် ABC ပလတ်စတစ်၊ တောက်ပ။ ချောမွေ့သည်။ ၎င်းတွင် ၁၄၀၀ မီလီမီတာစုပ်ယူနိုင်သောပုလင်း၊
AngelBiss ခရီးဆောင်စုတ်ယူနိုင်သောစက်ကိုတီထွင်ထားသော Direct Plug-in ပုလင်းစနစ်နှင့် Double Anti-Overflow protection system အတွက်အသုံးပြုသည်။
၎င်းသည်ကြင်နာသောအရေးပေါ်အခြေအနေများ၌နှင့်အထွက် ၀ န်ဆောင်မှုလိုအပ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုရန်ပိုမိုအဆင်ပြေသည်။
အမ်ဘီဘီအိတ်ဆောင်စုတ်ယူနိုင်သောစက်သည်အရည်၊ စုပ်၊ သွေး၊ သွေးစသည့်အရည်များကိုစုပ်ယူရန်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အိမ်စောင့်ရှောက်မှု၊ သွားဘက်ဆိုင်ရာနှင့်အရေးပေါ်သို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ခန်းများတွင်အသုံးများသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရှေ့သို့ AngelBiss ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာ
နောက်တစ်ခု: အောက်စီဂျင် Generator စက်မှုအသုံးပြုမှု
စုတ်ယူခြင်း Aspirator စျေး
စုတ်ယူခြင်းအနာ Drainage Aspirator